Soomaaliya, 15 April 2019
Ileyska VOA: Is-maandhaafka Qurba-joogta iyo Dal-joogta
Kusoo dhawaada barnaamijka Ileyska VOA, oo todobaadkaan ku saabsan qaabka ay wax u wada qabsan karaan qurba-joogta dalka ku laabtay iyo dal-joogta.
Warbixin: Deynta lagu leeyahay Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya ayaa maalmihi na dhaafay ku howlaneyd sidii deymaha looga cafin lahaa Soomaaliya
Puntland: Duqeyn lagu Dilay Sarkaal Daacish ah
Wasiirka Amnga ee Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa VOA u sheegay in duqaynta oo maanta dhacday lagu dilay Cabdixakiim Dhoqobeed oo ah ku xigeenka Sheekh Cabdulqaadir Muumin, hogaamiyaha kooxda Daacish ee Somalia
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sheegay in ay Baaritaano ku hayaan cidii ka dambeysay dilkii loo geystey Labo dhalinyaro ah oo midkood uu wadey gaadiidka Bajaajka markii dilkiisa uu dhacayey
Muqdisho: Ciidanka Somalia oo Dilay Labo Shacab ah
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay banaanbax ay oogayeen boqolaal dhalinyarada ku shaqeysta mooto bajaajta, kuwaas oo ka cabanaya dilalka ay ciidamada dowladda u geystaan dhalinyaradan oo soo kordhaya.
Barnaamijka Dhacdooyinka ee toddobaadkan waxaad ku dhageysan doontaan warar uu ku jiro qodobka cafinta deynta ee dunidu ka dhaafeyso dalka Somalia
Soomaaliya oo Rabto in Deyn Dhaaf Loo Sameeyo.
Waxaa dowladda Soomaaliya ay waydiisatey dalalka ku leh deynta $4.6 Billion in ay ka cafiyaan si dalka uu u helo maalgashi shisheeye.
Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn cirka ah ay shalay la beegsadeen maleeshiyada ururka al-Shabab, meel ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose.
Faaqidaadda: Deyn cafinta Soomaaliya